मोफसलमा सेवा बिस्तार गर्दै मेडिसिटी अस्पताल - नेपाल समय
मोफसलमा सेवा बिस्तार गर्दै मेडिसिटी अस्पताल
वीरगन्ज- गैर आवासिय नेपाली डा. उपेन्द्र महतोको ड्रिम प्रोजेक्ट नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले काठमाण्डौं बाहिर समेत सेवा बिस्तार गर्ने भएको छ ।
उस्ले पहिलो चरणमा आफ्नै लगानीमा अस्पताल पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानीको साटो मोफसलका अस्पताललाई फ्रेन्चाइजको रुपमा प्रयोग गर्दै सेवा संजाल बिस्तारको रणनीति अपनाएको हो । अस्पताल व्यवस्थापन सम्बद्ध श्रोतका अनुसार मोफसलको मुख्य शहरहरुमा संचालनमा रहेका नाम चलेका अस्पतालसँग मेडिसिटी अस्पतालले फ्रेन्चाइज शेयर गर्न थालेको हो ।
विराटनगरमा नोबेल,झापामा बि एण्ड सी, वीरगंजमा वीरगंज हेल्थकेयर सहित २८ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने तयारी रहेको डा. महतोले बताए । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पूर्वाधारको उच्चतम प्रयोग गर्दै मेडिसिटीको दक्ष जनशक्तिको माध्यमबाट मोफसलमै उच्चस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
यसै योजना अनुरुप वीरगंज हेल्थकेयर सेन्टरसँग फ्रेन्चाइज सम्झौता गर्ने तयारीलाई अन्तिमरुप दिन मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष डा. महतो आफैंले आइतबार अस्पतालको निरिक्षण गरेका छन् । पचास शैय्या क्षमताको यो अस्पतालले १०० शैय्या क्षमताका लागी पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ । मेडिसिटीसँग साझेदारीका लागी यो अस्पतालले हेलिकप्टर ओलार्न आवश्यक पर्ने हेलि प्याड समेत तयार पार्दैछ ।
सात सय पचास शैय्या क्षमताको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरको नख्खुमा गतवर्षदेखि संचालनमा आएको हो । यो अस्पताल १ खर्ब रुपैयाँको परियोजना हो ।
के–के सुविधा उपलब्ध हुनेछन् ?
मोफसलमा मुटुरोग, क्यान्सर,मृगौला,प्रसुती, प्रजनन् स्वास्थ्यलगायतको उपचारका लागी आधुनिक सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल मेडिसिटीले दाबी गरेको छ । बिरामीलाई टेलिमेडिसिनमार्फत् मोफसलबाटै मेडिसिटीको चिकित्सकसँग उपचार सेवा दिलाउने जानकारी दिइएको छ ।
पाँच वर्षमा दश अस्पताल
नेपाल मिडिसिटी अस्पतालको संचालनसँगै डा. महतोले थप दशवटा अस्पताल संचालनमा ल्याउने योजना छ । उनले पाँच वर्षको अवधीमा राजधानी भित्र पाँच र मोफसलमा पाँचसहित कूल दश वटा नयाँ अस्पताल आफूले लगानीको सम्पूर्ण जोखिम उठाएरै भएपनि संचालन गर्ने घोषणा गतवर्ष नै गरेका थिए ।
बिरामी बेस बिस्तार गर्ने रणनीति
ठूलो लगानीका अस्पतालको संचालन खर्च धान्न र पूर्वाधार तथा जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग गर्न बिरामीको आगमन पनि पर्याप्त संख्यामा हुनु जरुरी छ ।
काठमाडौंमा सीमित ठूला लगानीका सुविधा सम्पन्न अस्पतालले मोफसलका अस्पतालबाट चिकित्सक र बिचौलियाको रेफरबाट बिरामी पाए पनि औपचारिकरुपमा बिरामी आदानप्रदान गर्ने रणनीति अनुरुप ठूला अस्पतालहरु व्यवसायीक सम्झौतामा प्रवेश गर्न थालेका हुन् ।
बयोधा अस्पतालले मोफसल बाहिर तराईको वीरगंज,नेपालगंज लगायतका ठूला शहरहरुमा क्षेत्रिय स्तरमा अस्पताल संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । उस्ले करिब १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा वीरगंजमा १०० शैय्या क्षमताको अस्पताल पूर्वाधार तयार पारिसकेको छ । यो अस्पताल नारायणी बयोधा नामले संचालन गर्न लागिएको अस्पताल व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ ।